Madaxwayne Farmaajo oo Bulshada la Wadaagay Fariin ku aadan Maalinta 14-ka Octoobar | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Oct 14, 2019 - 48 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Bulshada Soomaaliyeed la wadaagay Fariin ku aadan Maalinta 14-ka Octoobar , Wuxuuna yidhi.
“14-ka Oktoobar waa maalin xasuus murugo u leh dadkeenna Soomaaliyeed. Waa maalin aan waynay boqollaal muwaadiniin ah oo uu taagnaa dib u dhiska iyo horumarka dalkeenna.
Ugu dambeyntii, waxaan Alle u weydniinaynaa naxariistiisa shuhadadii innooga geeriyootay weerarkan, anigoo faraya Xukuumadda in laga warqabo dhammaan muwaadiniintii lixaadkooda ku waayey falkan banii’aadamnimada ka baxsan.”
Madaxweyne Kenya maxaad ka tiri.
Fikir iyo cabsi midna kuguma abuurin. In aad cuna qabateyn saarto dadka reer kismaayo shacabka aad masuulka ka tahay.
Maxaad ugu dhiiran weyday dulmiga Kenya In aad ka madaxweyne ahaan ka hadasho oon codkaaga maqalno.
Nin soo qaldamay.
Garqaad, hadde adigu ma garakartid oo Mooryaan an kala dambayn aqoon baa tahee Guddoomiye Gobol AAN qaadanayn amarki Dawladda muxuu yahay?. WBT
Farmaajo.ha hadlin habaryar nin rag ahi waa kii gaws -adage,reer sharuur siyaasad waxba Kama yaqaanaan.
Hello garqaad ,ka Gabo,tareesaan Ku dul mariyee.
Dadka federal diidan fikirkooda wuxuu ka fakaday Kalsame…..kkkkkk
“Federaalka LOP micnihiisu waa qabiillada dekedaha iyo Ayraboorrada shacbiga Soomaaliyeed ka dhexeeya bililqaystay haa loo daayo, inta kale ha go`een.
Waryaad waxaa u sheegaysaan, bal caqliga ah kaligay an noolaado inta kalena waxba igama galin ninka laga gadayaa waa kuma?.
Marka hore soo celiya hantida qaranka, ka dib markii la sinmo aan ka tashanno sidii loo wada noolaan lahaa iyo qaabkii loo jeexi lahaa dawladnimada Soomaaliyada cusub” by Kalsame
Runtu waa taas kuwa federalka diidan oo Farmaajo iyo Khayre ugu horeeyaan
Waa beeshayda dan uguma jirto federalism.
Dal iyo mustaqbal laga fekerimaayo.
Madaxweyne Farmaajo waxaan ku xasuusan doonaa
– QALBI-DHAGAX iyo ONLF
– Mucaawimo iyo Xoolo Xaj joojin -WAQOOYI
– Qaad kenya FASIXID iyo Cunaqabateyn KISMAAYO
– Tuke iyo Moorgan la shaahe
* KAMPALA iyo KISMAAYO
Dabshid, ninki yiri XAMAR tegimaayo muxuu ii yahay Qalbidhagax?. °Moorgan ma taqaanid ee WAA nin Dagaalna ugu horreeya nabadna ugu horreeya oon cuqdo qabin oo markuu doono Shabeelada Hoose iska dhex wareega. °Haddaad dagaal beeleed ku eedeynaso ADIGA waxa kaa hadalsiina SOW Qabyaalad ma aha?. WBT
Rasalwasaare Kheyre waxaan ku xasuusan doonaa
– PARLIAMENT oo Noqdey Golihii XHKS
– MAXKANADDII SARE oo noqotey GOLAHII SOMALI YOUTH Diaspora
– Bank Dhexe oo Noqdey Dukaan lacag haye ah
– Gobolkii Banaadir State oo noqdey Xaafado kala Xiran
– Qurbo-joogtii Muqdisho oo Turkey loo xawiley
* Madaxweyne – SUULKA SAARO
* Guddoomiye Parliament – Suulka Saaro
* Guddoomiye Maxkamad Oo Waqooyi Diaspora laga soo XAWISHEY – Suulka saaro
* Guddoomiye Banaadir BANK oo Waqooyi Diaspora laga soo XAMBAAREY -Suulka saaro
* LITTLE DICTATOR KHEYRE Oil Hunter
“Raggii turuqyada adkaa tunkoodu libaax ahaa tallaba xumaa badeley”
War wallaahi maantoo kale Siyaad Barre waan u garaabaa saa wadan shisheeye weliba sankadhuudhu inta ku jees jeeso gebida muu rogteene.
Wallaahi kani hadduu caqli iyo damiir leeyahay bulshada inaanu soo hor istaageen.
Waa ninka xitaa tahli kari waayey inuu Kenya Qaadka ka joojiyo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ninka Leaderkaa waxaa lagu Gartaa
-Marka hore wuu ka fogaada waxa dhalinkaro CAADIFADAHA,
-Hadduu ku sameeyana wuxuu ku dhiiradaa inuu RAALI GALIN ka dhiibo, kuna cilmi qaato.
Aqristow is weydii suaalahaan
adigoo MADAXWEYNE U AH SOOMAALIDA MAANTA, adigoo og Waxey ETHIOPIA iyo Soomaaliya isu yahiin
Adigoo og Waxa Soomaaliya kala gaarey
Adigoo og wixii legdin Kismaayo ka dhacey
Adigoo og JILEECA SHACABKA KENYA markii HAL ASBUUC Qaadka ay ka joojiyeen Maamulkii Kaa horeeyey
– Miyaad Mujaahid Soomaaliyeed Diyaarad uga Qaadilaheyd CAASIMADDII SOOMAALIYA oo aad Geyn laheyd. XABSIGA CAASIMADDA ETHIOPIA ( Maxaadse GOVONLAHEYD ama Shaleyto ka qaadilaheyd HADDII Ninkaad dhiibtey adiga Laguu soo adeegsado INTA LA SOO DAAYO – Political Assassination –
– Dhaq dhaqaaqa Dadka Ku nool Gumeystaha Ethiopia miyaad ku sheegilaheyd ARGAGIXISO( Naxaadse KA BARAN LAHEYD haddii Ururkaad Argagixisada ku sheegtay -CADOWGII kugu QASBEY -uu ugu yeero URURKA XOREYNTA SOMALIGALBEED.
– Adigoo ogaa in Kenya xoog ku heysato Kismaayo
– Adigoo ogaa wixii kala qabsadey Maamulkii kaa horeeyey iyo maamulka Kismaayo
( Dariiqee u qaadi laheyd WADADA LOO MARO KUUKUUYO IYO KISMAAYO )
– Cuno qabatey shacabka Kismaayo
– Fasixid Qaadka Kenya
– waraaqo soo saarid iyo dib doorasho loo qaban Kismaayo
– Hawadii ood suuqa ka maqashey KHEYRE AYAA FUREY oo Fasaxey
( Yacni CARUURTA KU DHEESHO BACAADKA XEEBTA LIIDO) hadaad iga dumiso Anna waan kaa dumin
Haddaad Gufuurka ii Buurto ana Gafuurka ayaan kuu buuri
” Ciyaal Waaberi ”
Dadka federalka diidan ma gartaan: yaa iga xiga Bossaso ama Xamar, aniga qurbe ku raagay Jigjiga duurkeeda ka helay oo rabaa in guri ka dhisto, yaa i oran guri kama dhisan kartid, weyba ku farxin in aqli iyo hanti galinayo.
Dhulka Somalida degto waa naga dhaxeeyaa meeshii horumar gaarta waa wax noosoo wada siyaaday.
Daanyeer waxwalba qabiil ku cabira waa dhunsanyihiin.
Haddii xitaa qabiil Xamar unukaa leh ama Hargeysa unukaa leh ka dhacday sow ayagii beel beel hoose iskuma haystaan..
Somalinimo min wax ku waayey, walaahi in qabiil ku gaarayn.
Berigii Xamar dagaalku ka dhacay ee 1991 kii ayaa milishiiyo beeleed qabsatay AFGOOYE, markaasaa isbaarada waxa soo gaadhay Baabuur dad sida oo BARAAWE usocda.
Rakaabka gaadhiga waxa ka mid ahaa nin reer BARAAWE cad cad ahaa iyo xaaskisa, markay isbaaradii yimaadeen ayaa mid mooryaan ahi ku dhagay naagtii cadcad ka ahayd oo yidhi anigoo kufsada mooyee gaadhiga ma fuulayso waliba ninkeegu ha daawado.
Dantu kaa adage sidii baa naagtii lagu kufsaday ninkeegii oo daawanaya.
Markii laga dhamaystay hawshii baa la iska fasaxay, ninkii xaaskisii buu ku xanaaqay, markaasay ku tidhi maxaa kugu dhacay ood la xanaaqday soow col naga adag nama helin adiguna idifaaci kari wayday.
Odaygii wuxu ku yidhi xaaskiisi waa ogahay in qasab lagugu kufsaday laakiin waxaan ka xanaaqay NIIKADAA ku dartay anigoo kuu jeeda.
Markaa waan ujeednaa oo wada arkaynaa in KENYA Kismaayo KUFSATAY iyadoo NABAR & NAXDIN daawanayso oo waliba NIIKO ku dartaye maxaa laga qaban karaa AWOOWEE?!
Waxba lagama qaban karo!!
sOmalilander, hadde kuwaad ku tufday waa kooxdi Garqaade ogow. WBT
Dhoocisha ariga ku raacdo Baadiyaha waa ogtahey wixii Soomaalida kala gaarey
Saqiirka Luuqyada ku wado Garaangirta wuu ogyahey meesha ay hadda kala taaganyahiin Koofur iyo Waqooyi
– Ninkasto oo wanaag la rabo Soomaalida Cusub wuu ogyahey wixii laga soo marey sanadyaddii la soo dhaafey isku soo dhawaanshaha Shacabka Waqooyi iyo Koofurta
– Adigoo intaas og
adigoo MASUUL ah,
adigoo buuq dhoocil horey dad ugu caayey
Miyaad ku meereysan laheyd
– Mucaawimo shacab iyo Xoolo Xaj
– Haddana iney Fasaxaan raggii KAA hooseeyey.
” No vision of Leadership
– Leadershib is all about seeing and creating a BRIGHTER and BETTER future.
No fight Kismaayo today
Yes fight Kismaayo tomorrow
DHUBUQ DHUBUQ DHALAAN IYO DHOOHANE iga dheh
Ragga qabyaaladda indho tirtay: ayaa ugu horeysaa, waxaa moodaa in qabiil hadda heshay..kkkkkkk
Amiga 30 generation tirin karay magacooda aka Ab-tirsi.
inkasta oo hadda ilaaway.kkkk
Somalia oo meelwalba nabad tahay oo service u baahdo ka helikaro ayaa ii muhiim ag.
I don’t care qabiilka u badan magaalada.
Walle ninka in xoolo shaqaysan helo raba oo wixii lasoo maray raadinaya boorka looga tegin.
Inta goori goor tahay dista tuulooyinkiina awoowgiin ku duugan yahay.
Ama iska biqleeya…..
Runta ayaa idin dabridoonta sida rati waalan.
S/ lander. Awoowe Salaan sare.
Sheekada inta ugu danbeysa waan gartay.
Laakiin inta kore wexey u egtahay sheekadii reer qurac. Dee awoowe waa kusidee miyaa adna lagu soo dhiibay. Hhhhhhhh.
Suudi yalaxoow. Wuxuu dhahay nabad iyo nolol. Lug pudland ayaa la tagtay. Midna jubaland ayaa la tagtay. Gacantii midigna waxaa uga dhegan galmudug. Hadda Waxaa u soo haray af iyo calool iyo gacan bidix ah oon wax lagu cuni Karin.
Nabad iyo nolol. Warkoodu waa Aniga Aniga Aniga. Caqli maafish.
Federaal beela gaara u hiillinaya oo aan check an balanace iyo kala danbayn oggolayn, oo wada astaan beeleed leh, oo madaxay iyo minjahay furan ah, oo ayna diiwaankiisaba caddaalad ku ool Federaal ma aha. Wuxuu la mid yahay jabhadihii wada S-ta watay.
Waxaad aad ugu celcelisaa Dederaal baa la diiddanyahay, war Federaal cidu ma diddana ee Federaalka laba shubka kuugu dhacay weeye waxa ay dooddu ka taagantahay.
Miyaanay jirin federaal kaa ka nadiifsan oo waaqica ku salaysane aan ahayn laablakac iyo tayda mooyee waxa kale waa baadhil.?.
Miyaanu jirin baa u jeeday.
Federaal baa la diiddanyahay waa kaar yar ood muddo soo xoqoteen waana lagu qaashaye bal ugu yaraan beddela kaartada.
Waxaad ka hadlaysaa federaale adigu qarannimadii oo dhan baad diiddantahay, mayd kee u danbeeyay waa ka hadda la sii sido, ninka safka Uhuuru kula jiraa waa kuma, ma Federaal diid baa mise waa adiga?.
Haa anigu waxaan ahay Ninkii kaa kansalay jeegii wareegay ee xaraanta ahaa.
Waxaan ahay Ninkii ku baray xeryaha dhadhaab.
Imisa caruur ah ayaa dhadhaab kugu dhalatay.
Salaan sare awoowee..
Walhy hadalkaas xanaaqa baa iga keenay maxaa yeelaay waxaan arkayaa maantaa in reer Mogadishu loo tashaday ilaa iyo hadeerna aan wax muuqda oo mustaqbal ah oo hawiye leeyahay ii muuqan.
War malaha ISBAAROOYIINKII baa laydiin qaadan lahaa awoowe ood soo celisaan.
Maantaa KISMAAYO kuma dhaantayseen KUKUYO & KAB & LAX.
Ahmed Somali wa oday weeyn oo intaas u dhex fadhiya kalshaale.com siduu uu dadka isugu dhufan lahaa…wax kasoo qaad maleh hadalkiisu.
FARMAAJO, waxaan leenahay gabaha aad ku leedahay DAAROOD WEYN ha dhaafin.
Kabaha SADE DAAROOD waa in aad qaadataa. Hadii aad qaadato KABO KAA WAAWEYN, waad lumaysaa.
Berrina waxaa la arki doonaa, adoo jeexayaa KUKAAMO.
KORSIGA MADAXWEYNAHA waxaad ku fadhidaa 4.5. Marka, waa in aad joojisa:
1. Ciyaalka aad durbaanka aad u qaraacayso.
2. Lacagtii lagu helay magaca SOOMAALI WEYN sidee tahay u qaybi, oo siyaasad rakhiis ah, ha ku maamulin.
3. Tix geli Nidaamka FEDERAALKA, oo SOOMAALI WEYN qaadatay oo ay ku caano maalayso.
Hadii aad sidaa yeeli weydo:
ADEERKAA JAALLEE SIYAAAD DHABADIISA AAD QAADI DOONTAA..
Baahashu Maaha sidaad mooday. Bal halka kalana ka eeg awoowe.
Xamar hadii isbaaro la dhigo hadii ganjeel lagu xiro. Hadii dowlad wax laga cuni hadii laga sheqeysto. Intaba waa Aniga oo farmaajo wax shaqo ah iyo wax eed ah kuma lahan.
Dee xamarbuu iska joogaa halkaa ayaan ku ilaalinaa. Waana joogayaa inta u hartay. Halkaa wixii ka halaabo kheryraa masuul ka ah. Ileen isagaa waayay awoodii madaxweynaha.
Halkaa iyo kismaayo waa iska sheeko loolan ah oo looga baal xaraayo doorashada soo socoto sidii meesha loo dhaafin lahaa. Isu seediyaasha.
Waxaa kaloo farmaajo la tusaayay xukun marexaan iyo kablalax halkeey kala joogaan. Calashaan ma geeysid. Waxaadna ka garan kartaa Maah maahdii aadan Barre ducaale. Habar iyo uunsi. Hhhhhhhh
Haa xoogaa maamuladii hawiye iskugu toosno laakiin wexey dheelayaan sisaayad qaboow xamar ayey tubo u suran tahay.
Galmudug waxaan ka soo wadnaa maamul uu xasan cali kheyre. Garwadeen ka yahay. Halkaa iyo hiirshabeele waxaa socdo dadaalo culculus oo alshabaab gobalka looga saraayo.
Garqaad adeer, adduuku horuu u socdaa ee gadaal ha u noqon. °Farmaajo xuddun tiisi XAMARAY ku duugantahe Taadine?. WBT
Haddi aad tiraahdo gabadh reer Baraawe aa lagu hor kufsaday ninkii qabay, run aan u qaadanaa.
Hase yeeshee, wixii ka dambeeyey, waa in aad sheegtaaa..
458 dhalinyaroo ah, oo uu soo hubeeyey, abtigeey CABDULLAAHI YUUSUF, ayaan ka dagaalanay BARAAWE.
WALAAHI, ninkii haaysta MOORIYAANTII haaysatay BARAAWE, isaga oo nool aad dameer dabada uga soo xidhnay..
Magagaciisa waxaa la dhihi jidhay, DHUXULOOOW, wuxuu ahaa CAYR.
Ninka na watay, waxaa la dhahaa COL. MA-NAXI.
REER BARAAWE, ma ahaa ABTIYAASHEEY SACIID HARTI, oo sharaftoodii iyo karaamadoodi dhaafsanayaa xoogaa lacag oo sandariirto ah..
Waan ka xumahay, SACIID HARTI, oo mahigaan ka badan, in jaraha loo miiqo….
SANDARIIRTO, SANDARIITO, belo ha cunto..
Iskadaa taariikhdaas qadiimka ah, maantay maxaa ka socoda SHABEELAHA HOOSE.
Mr. NAJAAX, maxuu ka wada GOBOLKA SHABEELAHA HOOSE..
KU BISHAARAYSO, QAARMADOOBE, waxaa ugu dambeeya ee lagu soo aruuriyey: CEELASHA BIYAHA…
TAAS KU SEEXO….
Waa ku ogahay in aad qabiil isku dir aad wado..
Laakeen, maantay, SOOMAALI WEYN waa FEDERAL SYSTEM..
QAARMADOOBE guri uu leeyahay mooyee, guri kale ka soo toosi maayo…
ISAAQ hadi aad tiheen, dhulka ISAAQ leeyahay baa alla idin baday, ee ii maansada.
Waar meesha maxaa qarandiid ka buuxa.waxaban mooday in aan Ksimaayo joogo.
30 sano iyo Inan guumeed Amxaar iyo Kikuuyo hoos jooga,mid kale oo wali ka shiksan in sigaar afka lagaga bakhtiyo somaliya oo u afduuban.
Kismaayo,waxaan loo dirayaa Wiilashii Indhaha Cascasaa.kkk
Kismaayo waa qax ma hurto.
Waa meesha ugu dambaysa iyo markii ugu dambaysay ee la biqleeyo.
Calool yoowga ka ka muuqda Garoowe iyo Fukcingstreet.
30 sano – waa muddo aad u dheer.
sOmalilander adeer, AUNTE nin Duuliye ahaa oo la dhihijiray CAWIL Jaamac ayyaan qabiil ka sheekaysanay MAR buu igu yiri; “War waxaa nala dega Buuraha Sheekh qolyo aan la aqoon halkay galaan Markaasu iisoo qabtay beeyd yaroo gabay ah oon ka xusuusto; “War reer hebel? Ciise Muuse ma aha oo reer hebelna ma aha ee ma Dameeraha dhalay?. °sOmalilander adeerow bal kuwaa dameeruhu dhaleen war iga keen Waxaa laga yaaba ama inaan ka soo jeedo ama ay iga dhumeene. “Annaga taasi nama dhibtoo oo cid aan nalaku sheegin Dir iyo Daarood majirte LAAKIIN waxaaso dhan waxaa isku fuuqsatay Ayeeyo DAARA Mudullood Dhanka kalena waa Laylkase M/med iyo Xawaadle M/med. °Aadaale aadaale sow sOmalilanderow adeerow Somali oo dhan iskuma fidin. TAF. WBT
Bal xaniiyo raganimo iska baar oo nooga sheeke wixii kuugu dhib badnaa WAQTIGII JIDKA DHEER.
Soo maahid ninkii dhahey golaha waxaa ONLY QABYAALAD KA SHEEGO @ GARQAAD iyo Dabshid
Caddaaladaas waa waxa BARAFKA KU BADEY adigoo CANSHUUR BILAASH AH XAMAR ku dhuuqo.
GUNO bilaash ah, GARAADO Jumlo ah, iyo Gardaro orod badan.
Oran iyo Hiiraan intey iska soo galaan.
Nimankan hawiye wax ka dhigaya oo Dabshid & Garqaad ugu horeeyaan baan la yaabaa.
War meel naga fadhiista farmaajo isagoo meel idinku xidhay oo Sheekh Shariif sidii wiil yaroo tahriib u socda oo sharci aan haysan kolba airportiga laga soo celinayo Xasana uu daaqada hadba kasoo qooraansanayo oo uu banaanka taaganyahay uu leeyahay Sheekh Shariif ma gudbey anna aan ku daba dhuuntee oo ka quustay dhoofitaan ayaa alle Deni idinku caymiyee.
Deni oo wax walba loo balanqaaday balse diidey in Dooroodnimo been been ah iyo lacag lagu baajiyo ayaa Kismaanyo ka degey. Dabadeedna sidaa ayaa lagu fasaxay Sheekh Shariif Xasana ku daba galaye.
Maalintaa ayuu ugu caqli badnaa uu gartay inaanay macquul ahayn in Deni Kismaanyo ka dego Xsan iyo Sh Shariifna inay xamar ku oodnaadaan ainaanay sax ahayn.
Meel naga fadhiista marka Hawiyihiina maahee. Haddaad tabar haysaan waa hore ayaa la idin arki lahaaye kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Marnaba haku riyoon inaan kaala doodno Seedigeen Farmaajo
Marnaba haku riyoon inaan Farmaajo kala doodno nin Kablalax ah
Marnaba haku riyoon inaan Banaadir State kala doodno
Nimaan ka mid aheyn maamulada
* Tanaago Geed Saaran Farmaajo loo toogan maah.
– EE hadaad Daaroodnimo ugu hiilin Xaa ku taagey Hortiisa.
Warkaas waxaan u fahmay farmaajo maxaad ula dagaalami weyseen. Eboow. Farmaajo Maaha. C/ laahi yuusuf mana soo korin kaare amxaaro. Yaan lagu fahmin.
Hadalka dhibtaa ah ee kablalax waa sidaan.
Miyaad ARAGTEEN qof kablalax golaha ka joogo oo hadalkaan ka jawaabay?
Banaadir shaqaale ayaad ka dhex tahay canshuurtana waxna shabaab baa qaata waxna ninkii Villada markaa jooga.
Galmudug gocoso waxna dhulkeedii shabaab baa haysta waxna canshuuri kama soo xarooto dadka yar ee fara ku tiriskaa ee meesha ku nool.
Waa deegaan sidii 91 intii xoogga lahayd koonfur ugu hayaameen aan ilaa hadda lagu soo laaban. Inta yaree ku hartayna wax nidaam iyo meel dhaqaale kasoo galo toona aan haysan.
Hirshabeele waa deegaan Barwaqaa laakiin dad u tashada aan haysan,Shabaab ayaa inta badan deegaanada ka arimiya.
K.Galbeed intii xoogga lahayd wax u kala baxeen wax xamar ka xamaasha wax shabaab noqday iyo wax Puntland u hayaamay.
Warma intaan VOTE kii ku maqnabaa meesha lagusii galgashay…Horudhaca VOTE ka Canada ayaan ku jiray oo soo Dhiibtay codkayga awooowe.
Waan gartay awoowee…kolayba HAWIYE waa naga dulqaad badan yahay hadaan nahay ISAAQ…oo samirka ayaa nagu yar sidiina..
Inaad JABB la maagantahiina waan ogaaday AWOWEE..,,hawasha sifiican baad u wadaan.
Halkaas kasii wadaa, waxaan ku faraxsanahay inaad maanta ogateen dhagarta laydiin maleegaayo..
Mahadsanid awoowee …
Yeey gaajaynsan oo sarajooga ku diiranaya Somaliya.
Mooryaanta Daarood oo kaashanaya Mooryaan Hawiye,iyo Dugaaggii yaryara oo daba socda.
Haadkii oo raqda dusha ka eedaya.
Somaliya waaa meel ay u badanyihiin Daarood;dhul ahaan iyo Qabiil ahaanba.
Laba shay inta ay jiraan Somaliya halis ayay daaqaysaa.
Daarood oo u badhan Somaliya.
Shisheeye dano ka le Somaliyeed.
Mida kaliya ee ay Somaliya kaga badbaadi kartaa inay xijaabato waa Hawiyaha indhaha kala furaya oo badbaadiya Somaliya.Aka Caasimada.
Dhibku waa maxay?
Dhibku waa lacag jacaylka Hawiye,iyo meesha wax laga dilaalo uu Daarood soo helo.
Hawiye lacag ayuu jecel yahay.Meeshii lacagi taalo hore ayuu ka aadayaa – xataa hadii dhulka Somaliyeed la xaraashayo.
Meelihii lacagha xaaraanta ah laga helayay waxaa soo hela Daarood.Misana wuxuu u yeedhaa Hawiye.Dee halkaa ayay balaayo ka dhacaysaa.
Meega i siinaysaa?
Tani hadalka ugu horeeya ee ka soo baxaha Aka lacag raasid
Somaliya halis ayay daaqaysaa.
KKK war ninyoow adigu meel aan kuu raaco & cid aan kuu dilaba mahayo.
Nin weeyn oo oday ah oo aan cidi aqoon ciduu yahay oo hadana KALSHAALE nagu xagxaganayaa ayaabaa yaab leh.
Bahaloow waxaan arkay adigoo leh sigaar baa lagugu bakhtiiyay.
Adeer r ninkii rag ah ee xiniinyo leh ee wax iska dhicinaya ayaa sigaar lagu bakhtiiyaayee adigu maanta ma leedahay nin ka dhiidhiyayaa GUMAYSIGA ISAAQ oo sigaar lagu bakhtiiyo?!
Ragii berigaas sigaar ka lagu bakhtiiyay waa kuwaas maantaa aad hoos joogto ood ku qabsantahay inaad CASHUURTA SIISO.
Mahaysaa cid kaa dul kicisa oon SIGAAR ku bakhtiiyo?!
Maalintaad raga nimo iyo xiniinyo iska baadho bal aynu aragno iyo in SIGAAR lagugu bakhtiiyo.
si fiican u akhriso waxaan qoray.
Idoor ayaa ku dacwiya in ina askar futadiisa laga dhigtay Cendrier aka sigaarka lagu bakhtiiyo.
Waa lana laay.Sidaasi ayaanaan ugu noqnayn Somaliya.
Laakiin waad qasban tahay.
Iska bilqlee.Ma taqaanid sida dawlad loo noqdo.
Nin rageed u badheehay wuxu diidan yahay oo doorbiday inuu iska dul kiciyo waxaanu rabin baa sigaar iyo waxii doono lagu sameeyaa…ama or ash try laga dhigtaayee…
Adigu maantaa yaaa ku xoraynayaa oo aanu Cendiere ka dhiganaa ama ASH TRY?!?
Adigu ma leedahay qof ISAAQAA kaa dul kiciya oonu ASH TRY ka dhigano baan ku idhiye mahaysaa?!!
Ka jawaab su’aashaa adigoon galgalan oo raffan?!
Mahaysataa qof ISAAQA kaa dul qaadaa?!
Suldaan WABBAR bal noo sheeg halkuu ku danbeeyay ilayn kaas baabaan ku bakhtiin lahaynee!!??
Doodan yar ayaad ka garanaysaan qolada NN qaabka ay u fekeraan. Wuxuu ku leeyahay mar haddii sharciyadiii nala siiyey cidna la tashan mayno annagaa wax walba u madax bannaan. Bal gunaanadka ugu dambeeya dooda dhuuxa sida loo kala feker duwan yahay
Bahaloow ragu markuu u badheedho inuu is xoreeyo wuxu doonaba waa la kulmayaa…rag badan oo wasiiro ah oo madaxa laga toogtay baa maantaa dalka xukuma ood adigu canshuurta siisaa…maxaa yeelay mabda’iisii dee wuu gaadhay.
Intay doontaba haku qaadato…dhib walba halasoo maro…laakiin ujeedkiisi waa gaadhaay dalkiisiina waa hantiyay.
Can you believe that in Dal & duunyaba loo huray in dalkan laga sifeeyo CADAWAGA ISAAQAA?!?…
Waa adigaa maanta hadli kari la oo CANSHUURTA QASAB ku dhiibayaa..waanaa midhihii SNM!!
Hello Mr Bahal…
Adeer walaahi waan ka xumahay in ciyaal iyo jaahil qabyaalad madax martay kula sheekaysanayaan.
Xitaa in Somali is jecel oo qabiil walba ka guursatay oo xitaa ku dhaleen in ku dhex kortay oo qabiiladii kuu sinmeen, kuma fahmi karaan ciyaalkaan Kalshaale..
Xitaa in Xawaadle tahay ma aaminsana oo aqligooda ma keeni karo in daacad u hadlayso, waayo been iyo khiyaano ku koreen, maba aaminsana in jiro= nin afkiisa iyo uurkiisa isku mid yihiin oo munaafaqnimo aqoon.
Hadaad run sheegto ama Hawiye cayso waxaa tahay Daarood is qarinaya…kkkkkkkkkk
Sida weerarayso Isaaq iyo Majeerteen ma arkaan.
Aqligooda yar wuxuu siisay: Haddaad
Hawiye amaanin Hawiye ma tihid…kkkkkkk
Waa la isku dhunsan yahay…kkkkkk
Somali run ah Ahmed Somali iyo dhowr kale ka nool.
Adeer cimri dheer iyo caafimaad ilaah haku siiyo.
Thanks brother sida warka noogu soo gudbiso ka baxsan Maryoolayda faraqa is haysata oo wariyayaashooda la aamini karin waxa qoraan.
KKK war qotigii meesha miyuu ka cararay JAARSADA AHAA..
Waa kuwii aanu kaam kii qaaxoootiga ahaa ee SABACAD la odhon jiray Ku gubnay.
Siyaad Bare ayaa kasoo daabulaay AW-BARE meel la yiraahdo oo kilinka shanaad ku taalaa.
IDOOR baan dalka ka sifaynayaa soo yaacaa!!
Aww..shoudn’t’ve have been waisted my time for an indigenous people.
Sorry for inconvenience to everybody!
Wax badan oo fiican iyo xunba waa lagu sheegay 47 comment ee iga horeeysay.
Raali ahaada, hadii wax horay loo sheegay aan ku celiyo.
Anniga waxeey ila tahay ninkaan madaxweeyne Farmaajo in uu yahay faashil daanyeer ah. Sababaha waa badanyahiin. Laakiin, hal sheey Ayaan tilmaami.
Ninkaan doqonka ah, last time, markii safiirka Somaliya Kenya laso raacdeeyay, kadib waxuu tagay Kenya, xataa lama raali galin. Dadka Somaliyeedna uma sheegin in eey tilaabadaas aheeyd daanyeernimo. Bahidlaad ayeey aheeyd.
Now, hadeer, oo Kenya eey lugahii ayeey horay ugula jirtay Kismaayo’e, eey hadeer gacmahii lasoo gashay, waa uu kari la’yahay daanyeerkaan Farmaajo in uu ka hadlo, waa uu kari la’yahay in uu uGu yaraan dhaho jaadka Kenya ee daroogada ah, ee dadkeena lagu baabi’inaya lama keeni karro Mogadisho, oo ah suuqa uGu weeyn ee daroogadaas Kenya eey lacagta uGu badan uga dhacdo Somalida daanyeerada ah.
Intaas waxuu u karri la’yahay waa isaga, Kheeyre iyo dhamaan daanyeertii Somalida horboodeeysay last 30 yeaars ,farra ayaa laga hayaa. Kenya ayeey lacag iska galiyeen, guryo iyo ganacsi. Marka ma hadli karraan, ma’is dhaqaajin karraan. Waa Qatar “national security” ah in daanyeerta Somalida eey lacag iyo hanti xaaraan iyo xalaalba sideey doonaan haku heleene eey galiyaan Kenya.